Emily Dickinson. Afọ 189 nke ọmụmụ ya. Nhọrọ nke uri | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Foto. Mahadum Amherst
Emily dikinson Ọ bụ otu n'ime abụ abụ kacha mkpa n'akụkọ ihe mere eme nke akwukwo akwukwo America na nke uwa nile, n'ogo nke ndi obodo ya Edgar Allan Poe ma obu Walt Whitman. A mụrụ taa n'obodo Amherst, Massachusetts, na 1830.
Ejiri ọrụ ya mara ọrụ ya, na ọ bụ ezie na n'etiti ndị nwere ọgụgụ isi dị ukwuu, ọ nọ na gburugburu ebe obibi dị ọcha. Site na ndụ zoro ezo, ya mere ya Producción, nke edezigharịrịrị mgbe ọ nwụsịrị. Ma, ịgụ ya ka mma karịa ka anyị kwuo gbasara ya. Ya mere, ọ na-aga nhọrọ nke ụfọdụ n'ime ọtụtụ poems dị mkpirikpi onye dere.
Ọ bụ nwa na nwa nwa nke onu ogugu ndi di nkpa nke oge ahụ, mana agụmakwụkwọ ahụ na gburugburu siri ike na nke mechiri emechi mere ya a onye owu na-amaghi ama. N’ihi nke a, o nweghịkwa ọtụtụ ndị enyi. N'ime ha bụ asọpụrụ Charles wadsworth, onye kpaliri echiche ya na uri ya nke ukwuu. Ọzọkwa ọ masịrị ndị na-ede uri Robert na Elizabeth Barrett Browning, John Keats, yana ihe odide nke Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, na nke ndị na-ede akwụkwọ akụkọ Nathaniel Hawthorne na Harriet Beecher Stowe.
Ya ọrụ na-aga site na Conalism nke ụkpụrụ ya na usoro nke ụdị na ọdịnaya na sublimation na nweta nke ịhụnanya - ma ọ bụ ịhụnanya - ụwa n’ebe Chineke nọ. Ọ bụkwa n'ihi owu ọmụma ya dị mkpa chọrọ site n'ike aka ya. Ma mgbe ụfọdụ fluctuates n'etiti ìhè na nghọta na mgbagwoju anya nwere ọgụgụ isi. Ma ọ dịghị ihe na - adọpụ uche gị. Ndị a bụ ụfọdụ abụ ndị dị mkpụmkpụ mgbe niile.
Eluigwe dị ala
Eluigwe dị ala, ígwé ojii jọrọ njọ;
onye njem snowflake
site n'ọba ma ọ bụ furrow
arụrịta ụka ma ọ bụrụ na ọ ga-aga.
Ikuku na-acha na-acha na-eme mkpesa ogologo ụbọchị dum
otú mmadụ si mesoo ya.
Nature, dị ka anyị, na-ọnyà mgbe ụfọdụ
enweghị isi ya.
Mara ka esi ebu oke anyi n’abali
ma ọ bụ ụtụtụ dị ọcha;
jupụta anyị efu na nlelị,
jupụta ya na bliss.
Lee kpakpando, na kpakpando ozo nke di anya:
ụfọdụ na-efu efu.
Lee alụlụ, a gafee alụlụ ọzọ,
ma emechaa ụbọchị.
Oge agabigala Nwoke
kama ọ ka n earlybido Chineke
Ihe okike, enweghi ike inyere aka
ma ekpere di n’akuku ayi
Eluigwe magburu onwe ya
mgbe ụwa na-enweghị ike inwe
Olee otú ile ọbịa, mgbe ahụ, ihu
nke si n’aka onye agbata obi anyị, bụ́ Chineke.
mana o doro m anya ebe m si njem
Anaghị m ebi ndụ-
nke a ma ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ na ya- hụrụ n'anya,
Iji gbanahụ ụwa
akwukwo bu ihe kachasi nma;
na ị na-eme njem ka mma na uri
na nke kachasị mmụọ na ngwa ngwa
Ọbụna ndị kasị daa ogbenye nwere ike ime ya,
Onweghị ihe ọ ga-akwụ:
mkpụrụ obi na njem nke nrọ ya
a na-azụ ya naanị site na ịgbachi nkịtị na udo.
Ezowo m n’ime ifuru m
ya mere, oburu na I buru m n'obi gi,
n’enweghị na-enyo ya enyo, ị nọkwa ebe ahụ ...
Naanị ndị mmụọ ozi ga-ama nke ọzọ.
ya mere, mgbe m si na iko gị wepụ,
gị, n'amaghị ya, na-eche
ihe foduru na owu nnwapuru gi.
Nrọ bụ onyinye aghụghọ
nke ahụ na-eme anyị ọgaranya otu awa
mgbe ahụ ha na-atụda anyị ogbenye.
N’èzí ọnụ ụzọ na-acha odo odo
Na akara oyi
Nke mbụ nwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Emily Dickinson. Afọ 189 nke ọmụmụ ya. Nhọrọ nke poems